Vaovao Samihafa Archives - Page 143 sur 215 -
Alatsinain’ny Paska : Lany artista ireo mpikarakara fampisehoana
18/04/2017 admintriatra 0
Saika nitovitovy. Tsy dia nisy nampiavaka azy tamin’ny ankapobeny ireo fampisehoana teto Antananarivo tao anatin’ny fanamarihana ny alatsinain’ny paska. Maro tamin’ireo mpanakanto no hita tamin’ny fampisehoana maromaro ary tamin’ny toerana samihafa. Tranga izay maneho fa …Tohiny
Fitendrena Angorodao : Hanohy ny lalan’i Médicis i Rina Rakotovao
15/04/2017 admintriatra 0
Mpanakanto tsy dia hita loatra eny anoloan’ny sehatra, nefa manana anjara toerana goavana amin’ireo tarika misy mpanakanto hiarahana miasa. Anisan’ireo malagasy tanora sangany amin’ny fitendrena angorodao i Rina Rakotovao izay mpikambana tao amin’ny tarika ZMG, …Tohiny
Hira fiderana sy Vavaka : Mpanakanto maro handray ny « Fitsanganana feno fahavelomana »
Fanamarihana ny alatsinain’ny Paska ao anatin’ny hira fiderana sy Vavaka. Mpanakanto maro no handray anjara amin’ilay hetsika « Fitsanganana feno fahavelomana » izay hotanterahina etsy anoloan’ny lapan’ny tanàna Analakely ny alatsinainy izao. « Analakely ivon’ny tanàna no hanombohana …Tohiny
Antsa Paska : Fampisehoana mozika klasika entin’ny Orimbato
Toa ny isan-taona, hanolotra Antsa Paska indray ny antokom-pihira Orimbato avy ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. Fampisehoana klasika nampitondraina ny lohateny hoe « Hihira ny herinao aho » ary nankinina amin’ny Soratra Masina : « Fa izaho …Tohiny
« 1 … 141 142 143 144 145 … 215 »
Resa-be hatrany ny mikasika ny fifidianana izay hotanterahina amin’ny taona ho avy, indrindra ny lafin’ny fikarakarana izay toa misy milaza hatrany fa tsy araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana azy. Omaly àry dia nilaza ...Tohiny